တနင်္လာ - မနက် ၇း၀၀ မှ ၉း၀၀ ထိ
အော်တိုအစိတ်အပိုင်းမှိုများအတွက် ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အခြေခံမူအချို့ကို ပြောပြပါ။
1) လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် 1. ဝတ်ဆင်မှု ခံနိုင်ရည်ရှိမှု ကွက်လပ်သည် အော်တိုအစိတ်အပိုင်းမှို၏ အပေါက်အတွင်း ပလတ်စတစ်ပုံသဏ္ဍာန် ပုံပျက်သွားသောအခါ၊ ၎င်းသည် လိုင်နာ၏ မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် စီးဆင်းသွားပြီး လျှောကျကာ ကလိုင်မျက်နှာပြင်နှင့် ကွက်လပ်ကြားတွင် ပြင်းထန်သော ပွတ်တိုက်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ ရှုံးနိမ့်မှု ရလဒ်...
ဆေးထိုးမှို၏ အအေးခံစနစ်သည် မှို၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ဆေးထိုးပုံသွင်းခြင်းတစ်ခုလုံးအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။အအေးခံစနစ်သည် အပူချိန်မြင့်မားသော ပလပ်စတစ်မှ မှိုထဲသို့ ကူးပြောင်းသွားသော အပူအားလုံးကို တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန် ဖယ်ရှားပေးကာ မှိုအတွင်း၌ အပူချိန်ကို ထိန်းထားရန်...
မှိုအားလုံးနီးပါးသည် ဆေးထိုးပုံသွင်းစဉ်တွင် မှိုစကေးပြဿနာများ ရှိကြပြီး ဆေးထိုးမှိုများသည် ချွင်းချက်မရှိပါ။ဆေးထိုးမှိုများတွင် မှိုစကေးများဖွဲ့စည်းခြင်းသည် ဓာတုပစ္စည်းများ၏ကျန်ရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ အခြားအကြောင်းရင်းများလည်းရှိပါသည်။ဒါဆို မှိုစကေး အမျိုးအစားတွေက ဘာတွေလဲ။မျက်နှာမှာ...
ယနေ့မျှဝေခြင်း- Press quenching die steel ၏ အပူကုသမှုပုံပျက်ခြင်း၏ အဖြစ်များသော အကြောင်းရင်းများ
Press quenching ဆိုသည်မှာ အထူး quenching press die ပေါ်တွင် ငြှိမ်းသတ်ရမည့် workpiece ကို ထားရန်ဖြစ်ပြီး ပြင်ပအားကို အသုံးပြုနေစဉ်တွင် ဖိထားသော ဖြန်းဆေးများသည် ဆီ quenching oil (အနှိပ်သည် workpiece နှင့် die ကို ဖုံးအုပ်ရန် ဆီအဖုံးပါရှိသည်)၊ workpiece ကို မီးငြိမ်းစေရန်၊ စာနယ်ဇင်းစက်၏ upp ကိုခွဲခြားထားသည်။
မော်တော်ကားတံတောင်ဆစ်ရဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ပုံစံကို ဘယ်လိုဒီဇိုင်းထုတ်မလဲ။
ရှုပ်ထွေးသော မော်တော်ကားမှိုကို ရှုပ်ထွေးသောမှိုယန္တရားနှင့် လုပ်ဆောင်မှုအဖြစ် နားလည်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ၎င်းကို ကြီးမားသောမှိုတစ်ခုအဖြစ် နားလည်နိုင်ပြီး၊ အမျိုးမျိုးသောဖွဲ့စည်းပုံများ ယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုနှင့် မြင့်မားသောဒီဇိုင်းအခက်အခဲတို့ကို နားလည်နိုင်သည်။ဒီနေ့ ငါ မင်းကို ရှင်းပြမယ် ကြည့်လိုက်ရအောင်။မော်တော်ယာဥ်တံတောင်ဆစ် ထုတ်ကုန်များ ၊ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ...
နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ မှိုတွေရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
နေ့စဥ်လိုအပ်သော မှိုများသည် အမျိုးမျိုးသောနေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အသုံးများသောကိရိယာများဖြစ်သည်။၎င်းတို့သည် နေ့စဥ်သုံးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သူအချို့တွင် ပို၍အဖြစ်များသည်။လူတို့အသုံးပြုသောနေ့စဉ်လိုအပ်သော ပစ္စည်းအများအပြားကို မှိုများဖြင့် ပြုပြင်ကြသည်။ပစ္စည်းများကို အချိုးအစားအလိုက် ချိန်ညှိရန်သာ လိုအပ်သည်...
ကောင်းမွန်သောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ- ပလပ်စတစ်လှည့်ကွက်ပုံးမှို၏ အထူးဖွဲ့စည်းပုံသည် ခိုင်မာမှု၊ သက်ရောက်မှု၊ ဖိသိပ်မှုအားကောင်းမှု၊ တုန်လှုပ်မှုစုပ်ယူမှု၊ တောင့်တင်းမှုနှင့် ကွေးညွှတ်မှုဂုဏ်သတ္တိများကဲ့သို့သော အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ပေါ့ပါးသောပစ္စည်းများ- ပလပ်စတစ်လှည့်သည့်သေတ္တာတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ကိရိယာပါရှိသည်...
Turnover Box Mold ထုတ်လုပ်မှု
turnover box မှိုတစ်စုံပြုလုပ်နည်း။မှိုအခြေခံနှင့် အူတိုင်အတွက် မှန်ကန်သောသံမဏိကို ရွေးချယ်ပါ။ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် turnover box မှိုတစ်စုံကိုထုတ်လုပ်လိုပါက၊ သင်သည် မာကျောသောအကြို-မာကျောသောစတီးလ်ကို ပုံစံခွက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုကာ သင့်လျော်သောမှိုစံအစိတ်အပိုင်းများကို ရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ မာကျောမှု...
ပလတ်စတစ် ပစ္စည်းများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း
ပလတ်စတစ် ထုတ်ကုန်များသည် လက်ရှိလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် အသုံးအများဆုံး ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။၎င်းတို့ကို လူသုံးစားသုံးမှု၊ စက်မှုနှင့် စိုက်ပျိုးရေး ထုတ်လုပ်မှု၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် ပလတ်စတစ်များ ပါဝင်ခြင်းမှ ခွဲခြား၍ မရပါ။ဒီဇိုင်နာများဟာ မကြာခဏဆိုသလို...
ကော်ပိုရိတ်ယဉ်ကျေးမှု—Taizhou Aojie Mold Co., Ltd.
Zhejiang Taizhou Aojie Mold Co., Ltd. သည် အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်၏ လှပပြီး ကြွယ်ဝသော အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်၏ လှပပြီး ကြွယ်ဝသော ကမ်းရိုးတန်းတွင် "တရုတ်နိုင်ငံရှိ မှိုများ၏ မွေးရပ်ဇာတိမြို့" နှင့် "တရုတ်ပြည်ရှိ စိမ်းလဲ့ပင်များ၏ မွေးရပ်မြေ" ဟုလူသိများသော Huangyan တွင် တည်ရှိပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည် မော်တော်ယာဥ် ပလပ်စတစ် အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
EU သည် bionic ရောင်ဆေးထိုးနည်းပညာကိုမြှင့်တင်သည်။
ရောင်ခြယ်ပစ္စည်းကင်းစင်သော bionic အရောင်နည်းပညာ၏မူလအစမှာ သဘာဝ၏ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ရှိသော အပြာရောင်လိပ်ပြာ (Blue Merpho Butterfly) မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။လိပ်ပြာတောင်ပံများ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ တိကျသေချာသော နာနိုပုံစံဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်၊ နေရောင်ခြည်၏ လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင်၊ မတူညီသောအရောင်များ၊ အဓိကအားဖြင့် အပြာရောင်၊ appe...
ဆံပင်လေမှုတ်စက်ခွံများ၏ မှိုဒီဇိုင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် စက်ယန္တရားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးသည် CAD/CAM နည်းပညာကို ပိုမိုအာရုံစိုက်လာကြသည်။ယခုအခါတွင် CAD/CAM နည်းပညာသည် အတော်အတန်ရင့်ကျက်သော ဘုံနည်းပညာတစ်ခုအဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အိမ်သုံးအသုံးအဆောင်တွေ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့...
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက သင့်အီးမေးလ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ထားခဲ့ကာ 24 နာရီအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။